Ngwa Nchekwa Surge SPD Onye nrụpụta & Onye na-ebubata ya
Ebe nrụọrụ sel
Chemical na ụlọ ọrụ ọgwụ
Usoro eji ebugharị ụgbọ
Ikanam ọkụ SPDs
Anyị bụ Ngwaọrụ Nchedo Original Emeputa ya na ika ma na-enyekwa OEM na ODM ọrụ.
Anyị na-eji nka na nraranye - maka abamuru nke ndị ahịa anyị, ndị mmekọ, na ndị ọrụ.
Ngwaọrụ nchedo (SPD) Chebe Akụ Gị
Ọ bụrụ n’ị nwere mmasị ịbụ onye nnọchi anya anyị n’ahịa gị, anyị ga-abụ nkwado ndabere siri ike gị.
Anyị na-enye nkwado dị elu nke teknụzụ site na otu ndị ọrụ ntanetị. Ekwadoro enyemaka site na ekwentị, ozi E-mail ma ọ bụ ogbako Whatsapp yana na mgbakwunye, ndị ọrụ aka anyị na-ahụ maka ọrụ nyocha na ahịhịa dị n'akụkụ ụwa niile chọrọ ka echedoro na-enyekarị ndị ikwu nke usoro SPD yana usoro nrụzi na mgbakọ kacha mma. Ndị otu injinia na-ahazi ọzụzụ a raara nye ndị ahịa nke ndị na - ekesa ya na ndị ahịa.
Ndị ahịa nwere ike ịdabere na nkwado ọrụ a pụrụ ịdabere na ya maka oke zuru oke, izi ezi na ịkwanyere mkpa ha ùgwù. Companylọ ọrụ anyị na-arụ nyocha na nhazi nke sistemụ ahụ, yana mmekorita ya na ndị nrụpụta na injinia, ọkachasị ndị gbagwojuru anya, ma na-enye nkwado teknụzụ na azụmaahịa.
LSP bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka nkà na ụzụ na-agbanwe agbanwe, na-achọkarị arụmọrụ na nke kachasị mma.
Ndị otu anyị ruru eru na ndị ọrụ nwere ahụmịhe, anyị na-anwa ịnwe ọ bụla otu nzọ ụkwụ n'ihu ọhụrụ.
Kedu ka LSP ga-esi na-elekọta usoro gị
1.Rece mbụ imewe echiche ma ọ bụ sample si ị
A. You na-ezitere anyị echiche imewe gị ma ọ bụ eserese CAD gị, anyị ga-emepụta foto CDR n'efu maka gị.
B. You na-azụta CDR eserese eserese na ụlọ ọrụ imepụta ma zigara anyị ya, anyị na-ekepụta SPD sample dịka foto CDR gị.
C. Zitere anyị ngwaahịa ngwaahịa gị, anyị mepụtara otu imewe ahụ dị ka ihe nlele gị maka iwu OEM.
D. Họrọ site na mpaghara anyị dị ugbu a, anyị nwere ọtụtụ atụmatụ nke SPD - ọ bụrụ na ịchọrọ ụdị anyị, naanị họrọ ya na gallery anyị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị maka echiche ndị ọzọ.
2.100% Nnyocha maka Nkebi nke ọ bụla mgbe Mgbakọ gasịrị
Anyị ga-anwale arụmọrụ nke SPD ọ bụla iji hụ na ọ ga-emezu ihe ị chọrọ.
3.Professional Assembly ngalaba
Gbakọta akụrụngwa na ngwa niile na ngwaahịa ndị emechara arụ bụ ndị ọrụ ọkachamara na ndị nlekọta ruru eru na-ahụ maka nnabata ngwaahịa ikpeazụ.
4.Professional na-akara QC Team
Dị ka mmepụta chọrọ, niile na ngwaahịa anya na arụmọrụ nwere rue 100% online nnyocha site ruru eru QC n'oge nzukọ usoro.
5. Mezuo ihe niile ị chọrọ
Inspectiongbaso ngwaahịa nnyocha, anyị ga-ngwugwu ngwongwo dị ka ihe niile ị chọrọ. Agba nke igbe ahụ, okpukpu abụọ ma ọ bụ pallet. Anyị ga-ezitere gị foto zuru ezu banyere usoro nkwakọ ngwaahịa ọ bụla.
6.Safe na oge Mbupu
A na-eme nkwadebe Mbupu ọ bụla n'okpuru nlekọta dị nso. Anyị ga-enye foto nke usoro ọ bụla nke usoro gụnyere foto nke akpa ahụ echekwara. N'ihi na ụkpụrụ nduzi siri ike na nlekọta dị nso n'oge niile anyị nwere ike iwepu mmejọ na itinye ngwongwo gị.
Y ga - enweta foto na dọkụmentị niile
Anyị ga-enye gị foto niile edere, ndị otu anyị ga - enweta ibu ga - ezitere gị akwụkwọ niile mgbe emechara ya.
Anyị ahọrọla LSP n'ihi na a tụkwasịrị ha obi nke ukwuu site n'otu ụbọchị. Ha nwere ndị ọkachamara na ndị ọrụ a zụrụ azụ nke na-enyere anyị aka ịgbaso iwu anyị ma nwee obi ụtọ mgbe niile ịnye foto zuru ezu nke ngwaahịa ọ bụla ma ọ bụ usoro mmepụta ọ bụla - nke na-enye anyị ohere ịgbaso usoro ọ bụla nke usoro anyị. A na-ewepụta ngwaahịa niile n'ime akpịrịkpa oge ekwenyero dị oke mkpa maka azụmaahịa anyị.
Achọpụtara m ịnagide LSP nnọọ afọ ojuju, na nnọọ ogologo na-atụ iji usoro na magburu onwe technology iji rụpụta ngwaahịa. Ha bụ n'ezie ndị ọkachamara n'ọhịa ha na ezigbo onye mmekọ maka azụmaahịa anyị.
Aha ya bụ Anna Ventura, Spain
LSP nọ na-arụpụta Ngwaọrụ Nchedo SPD anyị kemgbe 2012. Ngwaahịa ọ bụla enweela ezigbo mma ma nata nzaghachi dị mma n'aka ndị ahịa anyị. Daalụ!
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, nkwado ndị ahịa ngwa ngwa dị maka gị.
Ngwa Nchedo Ọgba mgbaama
Ngwa mgbaaka mgbaama mgbaama Dehn - sistemụ IT DIN Rail etinyere SPD [...]
Ogwe osisi abụọ nwere ike ịpị ụdị 3 T3 jidere DR M 2P IL = 25A
Ogwe abụọ nwere ike ịpịpụta ụdị 3 T3 jidere DR M 2P IL = 25A DEHNrail modul abụọ. [...]
Nchedo anya maka 5G cell saịtị (ebe nrụọrụ ekwentị mkpanaaka)
Nchebe nchedo maka saịtị 5G cell (ọdụ ekwentị mkpanaaka) Chebe ike ọkpụrụ ihe Zere [...]
Ụlọ ọrụ ahụ bụ Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd.
Tinye: 5th FL, Nke 666 Yaming Road, Xiangyang Industry Park, Liushi, Yueqing 325604 Zhejiang, PR China
Ekwentị mkpanaka: + 86-18905776650 (WhatsApp, Wechat)
Email: ahịa [@] lsp-international.com
Copyright 2010-2022 Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd. Ikike niile echekwabara. | amụma nzuzo | Usoro na ọnọdụ |
Anyị na-eji kuki iji hụ na ị nwetara ahụmịhe kachasị mma na weebụsaịtị anyị. Nwetara ya!Mba